Sh.Usama”Cadaalada ka mid ma’ahan in Ameerikaanku ku Noolaadaan Baraare iyada oo ay Walaalaheena Gaza ku jiraan Nolol Rafaad badan”. | Halganka Online
Sh.Usama”Cadaalada ka mid ma’ahan in Ameerikaanku ku Noolaadaan Baraare iyada oo ay Walaalaheena Gaza ku jiraan Nolol Rafaad badan”.
Chanalka Al-jazeera ayaa Baahiyay Maanta oo Axad ahi Cajal Maqal ah oo uu soo Diray Hogaamiyaha Ururka Al-Qaacidda Sheekh Usaama Bin Laadin, wuxuuna Cajalkaasi ku sheegtay inay iyagu ka danbeeyeen Weerarkii Diyaradeed ee 25 December lala damacsanaa in lala beegsado Maraykanka.
Fariintani ayaa si gaar ahi ugu socotay Madaxweynaha Maraykanka,” ka socoto Usaama ku socoto Madaxweynaha Maraykanka Obama”.
Sheekh Usaama wuxuu ku jiri Cajalka “Fariinta aan Idiin soo saarnay Diyaaradii Cumar Faaruuq waxay Xaqiijinaysaa Fariin ka horeysay oo ah inuusan Maraykanku Waligii amaan ku Naaloon illaa inta ay Filastiin uga Naaloodaan Nabad”.
Wuxuu intaa ku daray”Cadaalada ka mid ma’ahan in Ameerikaanku ku Noolaadaan Baraare iyada oo ay Walaalaheena Gaza ku jiraan nolol rafaad badan”.
Sheekh Usaama ayaa ku Hanjabay “Weerarada aan idinku hayno way idinku soconaysaa Maadaama ay si joogta ah u sii Socoto taageerada Ameerikaanku siiyo Israel”.
Fariintan Tan ka horeysay ee uu soo diro Sheekh Usama Bin laadin ayaa ahayd 10 September ee la soo dhaafay taas oo kula hadlay Obama wuxuuna ku yiri “Awood u malana inuu Joojiyo Dagaalada ka socda Ciraaq iyo Afqaanistaan”.
« Faah faahin buuxda oo ku aadan dagaalkii Baladweyne, Halka la kala joogo, khidadii dagaalka iyo hub laga soo fagayo Hotel Hiiraan ee Baladweyne. Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa shalay galab maamul cusub u magacawday gobolka Galgaduud ee bartamaha Dalka Soomaaliya. »